Wararka - Waxoogaa aqoon ah oo ku saabsan suufka pee pee/pad puppy
Tianjin Jie Ya Products Nadaafadda Haweenka Co. Ltd., Shiinaha wax soo saarka iyo combo ganacsiga oo ku takhasusay wax soo saarka nadaafadda in ka badan 25 sano CE&ISO.Sidoo kale waxay leeyihiin in ka badan 7 sano dhoofinta iyo OEM waayo-aragnimo xirmo brand.
Alaabadayada ugu muhiimsan waa xafaayadda dadka waaweyn, xafaayadda surwaalka qaangaarka ah, suufka hoostiisa, suufka pee-ga rabaayada ah, marada nadiifka ah, dharka panty. Waxaan rajeyneynaa inaan wada shaqeyno si aan kuugu keeno wax badan oo aad u habeyn karto baahiyaha gaarka ah iyo margin.
Markan waxaan ka hadli doonaa wax badan oo ku saabsan suufka puppy-ga.
Eeyaha yaryar ee ka taga hal wiqiyadood ama laba mar kasta, waxaad ka tagi kartaa suuf maalintii oo dhan ama mararka qaarkood xitaa maalmo badan.Ilaa aad caruur yar ku haysato guriga, ma jirto khatar inaad ka tagto suuf la isticmaalay, laakiin waxay noqon kartaa wax aan fiicnayn haddii urta ay korto.
Immisa jeer ayaad bedeshaa suufka saxarada eeyga?
Inkasta oo jawaabta saxda ah ay ka duwanaan doonto ilmo kasta, guud ahaan waa fikrad wanaagsan in la beddelo suufka ka dib laba ama saddex isticmaal.Tani waxay ka joojin doontaa aagga dheriga inay u urayaan si xun.Waxa kale oo ay ka ilaalin doontaa ilmaha in uu si lama filaan ah ugu talaabsado qashinka naftiisa - wax AAN QOF rabin.
Immisa jeer ayuu ilmuhu ku fiiqi karaa suufka?
U gee eygaaga si joogta ah suufka dheriga.Inta jeer waxay ku xirnaan doontaa da'diisa iyo xoogga kaadiheysta.Ilmaha aadka u yaryar, waxay noqon kartaa inta badan 15kii daqiiqoba.
Intee in le'eg ayay tahay inaad isticmaasho suufka puppy?
Ilaa ugu badnaan 12 saacadood markuu jiro 12 bilood.Ma aha in aad had iyo jeer rabto in aad sugto 12 saacadood… Ujeedadu waa in ay awoodaan in ay sii hayn karaan muddadaas haddii loo baahdo.
Ma u tababari kartaa eey inuu isticmaalo suufka caaga ah oo uu dibadda u baxo?
Tababar ku meel gaar ah
Haddii aagga musqusha ee gudahaagu uu ku yaal meel ka fog albaabka, si tartiib ah u dhaq suufka suufka u dhow albaabka toddobaadba toddobaad.… Ugu dambeyntii waxaad u dhaqaajin doontaa suufka suufka midig ee albaabka, ka dibna albaabka bannaankiisa waxaad aadi doontaa meesha bannaanka laga saarayo.Ka dib waxaa lagu samayn karaa suufka pee.
suufka fiiqan miyay eeyaha wareeriyaan?
Jahwareerkani wuxuu dib u dhigi karaa dabeecadda la rabo ee lagu hayo ilaa ay ka bixi karaan dibadda.Intaa waxaa dheer, canuggaagu wuxuu noqon karaa mid ku tiirsan suufkooda.Waxay noqon kartaa geeddi-socod dheer in caadooyinka dheriga eygaaga laga wareejiyo suufka gudaha gudaha oo loo wareejiyo bannaanka oo keliya.
Waqtiga boostada: May-24-2022
Lady Pads, suufka nadaafadda 245mm, Ion Napkin Fayadhowr Xun, suufka Nadaafadda Dumarka, Tuwaalada Nadaafadda ee Haweenka Jilicsan, suufka Nadaafadda,